Semalt: Ahoana ny fomba hanakanana ny sakana amin'ny fanakanana ny tranokalanao
Ny bots dia ny programa sandoka sy automated izay mikaroka ny tranonkalanao hanao asa samihafa. Fomba fika tsotra izany ary mety hanimba ny tranokalanao. Ny sasany amin'ireo ohatra ny bots ireo dia ny lisitr'ireo pejy nadika tamin'ny alàlan'ny . Ny botsaka sasany dia mitsidika ny tranonkalanao ary mandefa spam anao amin'ny ankapobeny, ny hafa kosa manadinadina ny tranokalanao ho an'ny fahalemen'ny fiarovana - ejector thermodynamics. Alohan'ny hanakananao botsaka tsy hijery ny tranokalanao dia zava-dehibe ny handraisanao ny tranokalanao amin'ny tranonkala Apache. Ambonin'izany, ny tompon'ny tranonkala dia tokony hanome anao ny toerana misy ny ".htaccess", ary tokony hamita izany haingana araka izay tratra ianao. Tsy maintsy mijery ny vohikala mavesatra ao amin'ny tranonkala ianao ary mahazo ny tranonkalanao miaraka amin'ny mpivarotra web commerce.
Manazava ny lahatsoratra momba ny torohevitra mahasoa momba izany i Ross Barber, mpitantana ny Success Suisse amin'ny Semalt .
Manakana ny boka tsy mila
Azo antoka ny filazana fa ny fanakanana ny boka tsy mila ianao dia toy ny manandrana manala ireo viriosy na bibikely. Azonao atao ny manakana ny boot raha tsy efa fantatrao tsara. Voalohany, tsy maintsy mamaritra ny adiresy IP izay iavian'ny bots. Ho an'ity, afaka mandefa ny tranonkalanao ao amin'ny tranonkala ianao, hamafa izany amin'ny fanampian'ny arisiva ary manokatra amin'ny tonian-dahatsoratra tsotra. Eto ianao dia afaka mijery raha misy olona na botsika mitsidika ny tranokalanao. Ny dingana manaraka dia ny hitady ny fidirana amin'ny bots ary ny fikatsahana ny fanalahidin'ny mpampiasa..
Mariho ny adiresy IP ampiasain'ireo bots
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahafantatra ny fomba fanoratana ny adiresy IP ampiasain'ireo bots ireo. Mitandrema raha manao ity zavatra ity satria mety ho simba ny tranonkalanao raha tsy manakana ireo IPs faran'izay haingana. Ny viriosy sasany sy ny malware dia mety hampiditra ny ordinatera na ny fitaovana finday raha toa ka manakana ny bots. Raha hitanao fa avy amin'ny adiresy IP na adiresy mitovy ihany ireo botsaka ireo, dia tsy maintsy misoroka azy rehetra ao anatin'ny minitra sy mamelatra ny tranonkalanao Internet.
Download ny .htaccess File
Fomba iray hafa ny hanaisotra ny botsika sy ny fifamoivoizana sandoka. Ilainao ny mandefa ny rakitra .htaccess amin'ny alalan'ny FTP na SFTP client. Ho an'ity, tokony hitsidika ny tranokalan'ny aterineto ambony ao amin'ny tranonkalanao ianao, izay misy ny rohy aterineto. Azonao atao ny mahita an'io rakitra io ary maka azy amin'ny voalohany. Raha tsy mahita ity rakitra ity ianao dia azonao atao ny mahita azy any an-kafa, miankina amin'ny programa FTP ampiasainao.
Sokafy na mamorona ny .htaccess File
Raha vantany vao hita ny rakitra, ny dingana manaraka dia ny manokatra izany ary manitsy ny fanovana. Mamoròna antontan-taratasy tsy misy dikany ary mametaka ny angona misy azy. Mba hanakanana IP manokana, lazao, 127.0.0.1, tokony ampidiro ao amin'ny rakitra .htaccess anao ary tsindrio ny bokotra Block.
Mba hanakanana ny botsin'ireo mpikirakira mpampiasa mpampiasa, dia tokony hikaroka ireo kofehy amin'ny robot sy ireo izay manana litera tsotra amin'ny alfabeta izay tsy misy toerana, slash ary mari-tsoratra. Raha vao mipetraka ianao, dia azonao atao mora foana ny manakana izany ao amin'ny fitaovana misy anao ary afaka mitandrina ny tranokalanao.